Home Wararka Guuto Ciidanka Military-ga Eritrea ah oo kusoo wajahan Muqdisho iyo Baydhabo.
Sida uu sheegey La-taliyaha amniga qaranka ee Madaxweyne Farmaajo Mudane Cabdi-Saciid Muuse ayaa waxaa dhawaan la filayaa in Guuto Ciidanka Military-ga Eritrea ah ay Soo gaaraan Magaalooyin Baydhabo iyo Xamar.
Ciidanka Military-ga Eritrea ayaa Ka mid noqon doona Ciidamada Nabad ilaalinta ee Ka Socoda Wadamada Deriska ah, Cabdi-Saciid Muuse ayaa sheegey in hada lagu howlan yahay sidii loo qorsheeyn lahaa Deegaanada ay Ka howl galayaan oo la filaayo in ay noqdaan Jubada dhaxe iyo Galguduud.
Cabdi-Saciid Muuse ayaa sheegey xiliga ay imaanayaan Ciidanka Military-ga Eritrea loo qorsheeyey February 8 2019 ee sanadka cusub, waxaana loo sameyn doonaa soo dhoweeyn aad u balaaran.
Sida uu noo sheegey Cabdi-Saciid Muuse Madaxweyne Farmaajo ayaa hore u Saxiixey heshiiska ay ku imaanayaan Ciidanka Military-ga Eritrea ee Ka qeyb noqo doona Ciidamada Nabad ilaalinta ee jooga Soomaaliya.
Previous articleBoqortooyada Sucuudiga oo xiisad siyaasadeed ka dhex abuurantay
Next articleCorruption is the curse on Somalia. Vote buying elections will only harm more
Faahfaahin:Suuqa degmada Af-gooye oo gubtay
Mahdi Yatakabaruu : “TPLF qoraalkeedii ahaa reer aan Hawiye ahayn Dalkaan...